हरिहरदेखि हरिवंशसम्म - मनोरञ्जन - नेपाल
आउँदो जेठबाट २४ वर्ष टेक्दैछन्, निशान भट्टराई । उनकै उमेरका हिरो हरिहर अधिकारी मात्र होइन, दोब्बर उमेरका हरिवंश आचार्यका लागि पनि निशानले पाश्र्व गायन गरिसकेका छन् । फिल्म शुभ लभको शीर्ष गीतमा हरिहर नाचे भने दाल भात तरकारीको 'भिजिट भिसा...' मा हरिवंश । उनले नै गाएको जात्रै जात्राको 'माया पिरिम...' गीत पनि लोकपि्रय छ यतिबेला । तिनै गीतलाई फिल्म प्रचारप्रसारको मुख्य अस्त्र बनाइएको छ ।
नयाँ/पुराना हरेक ब्यानरका फिल्ममा निशानको स्वर अनिवार्यजस्तै हुन थालेको छ । जुन गीत गाउँछन्, प्रायः हिट भएकै हुन्छन् । नेपाली चलचित्रको पाश्र्व गायनमा निशानको यो गर्विलो हस्तक्षेप सुरु भएको थियो, 'नेपाल आइडल' को पहिलो संस्करणपछि । आखिर यही रियालिटी सोले त हो उनलाई दर्शक/श्रोतामाझ चिनाएको ।
धेरैलाई लाग्छ, निशानले 'नेपाल आइडल' मा भाग लिए, दोस्रो स्थानसम्म पुगे, त्यसपछि भटाभट गीत गाउने मौका पाए । यथार्थ यत्ति मात्र होइन, सोको प्रतिस्पर्धी बन्नुअगावै उनले संघर्षका अनेक शृंखला पार गरिसकेका थिए । कति अपमान, बेवास्ताको सिकार हुनुपरेको थियो । गीत गाउँछु भन्दा कसैले नपत्याउने । यी सारा ठक्करबाट सिकेको शिल्प 'नेपाल आइडल' मा पोखे । अनि, सुरु भए उनका स्वणिर्म दिन ।
मोरङको उर्लाबारीमा हुर्किए, निशान । प्लस टु त्यहीँ सकियो । संगीततिर दिलचस्पी थियो । जब बुझ्दै गए, मोरङमै बसेर गायक बन्ने सपना पूरा हुन असम्भवप्रायः छ भन्ने थाहा भयो । सोही कारण मनको भित्री आकांक्षालाई पछ्याउदै राजधानी छिरे । तर बाहिर बहाना अर्कै थियो, स्नातक पढ्ने । संगीत मात्र सिक्छु भन्दा कसले साथ दिने त्यतिबेला ? त्यसैले यहाँ आउनासाथ सुरुमा वाणिज्य संकायमा भर्ना भए । अभिभावक दंग । त्यसपछि लागे, संगीत पाठशालाको खोजीनितीतिर ।
'दर्शक/श्रोताको दिलमा पछिसम्म बसिरहने गीत गाउन चाहन्छु । सुन्यो, सकियो मार्का गीत मेरो रोजाइमा पर्दैनन् ।'
– निशान भट्टराई गायक
संयोगले उनको भेट भयो, संगीतकार/गायक मनोजराजसँग । निशान स्वयं मनोजराजका फ्यान थिए । उनकै सान्निध्यता पाउँदा फुरुंग । केही महिनाको सिकाइपछि गीत रेकर्डिङ गर्ने आत्मविश्वास पलायो । ती पल यसरी सम्झन्छन् निशान, "म दिलोज्यान दिएर गाउन चाहन्थेँ, तर चिनेजानेको कोही थिएनन्, न पैसै थियो । त्यसैले अरु त अरु रेकर्डिङ स्टुडियोले पनि धोका दिन्थे । सहनुको विकल्प हुन्नथ्यो ।"
यावत् पीडा सहेर गीत रेकर्डिङ गरे तर भनेजस्तो चर्चा पाएन ।
गाउन छाडूँ, मन मान्दैनथ्यो । गाइरहुँ, केही मेलोमेसो मिलेको थिएन । बरु गीतको चक्करमा लाग्दालाग्दै पढाइ बिग्रेला भन्ने सुर्ता चर्कियो । यही रापमा पिल्सिरहेका बेला आएको थियो, 'नेपाल आइडल' । "जब 'नेपाल आइडल' हुने खबर सुनेँ, र्फम भर्न हतारिएँ," निशान भन्छन्, "भोलिको आशा थिएन । कला पस्कन पाउँछु भन्ने हुटहुटी मात्र थियो ।" भलै त्यतिबेला गीत रेकर्डिङ गरिसकेको गायकले के रियालिटी सोमा भाग लिनु भनेर उनलाई खिसी गर्ने पनि उत्तिकै थिए । तर सुने, बिर्से । आफ्नो गायनकलामा विश्वास जो थियो ।
सोमा निशान एकपछि अर्को खुट्किलो पार गर्दै गए, हिजो उल्लीबिल्ली पार्नेको मुख टालिँदै गयो । भन्छन्, "न मलाई दोस्रो भएकामा कुनै घमन्ड थियो, न त पहिलो नभएकामा असन्तुष्टि । जे भयो, त्यसमै खुसी भएँ ।"
रियालिटी सो हुँदै गर्दा र सकिएपछिको केही समय खुब चमकधमक हुन्छ । समय बित्दै जाँदा गुमनाम हुने विजेताको सूची लामै छ, नेपालमै पनि । निशान बेखबर थिएनन्, यो नियतिसँग । सोही कारण सो सकिनासाथ व्यावसायिक गायनमा मग्न हुन थाले । नियमित रियाज त गर्थे नै, नयाँ-पुराना कम्पोजरसँग संगत पनि बढाए । त्यसमाथि 'नेपाल आइडल' मै उनले आफ्नो स्वरको अब्बलता पस्किसकेका थिए । धमाधम गीत गाउने प्रस्ताव आउन थाले । निशान ढाँट्दैनन्, "सोमा अरुले पहिल्यै गाइसकेको गीत गाउनु जत्तिको सजिलो थिएन, आफैँले नयाँ गाउन । त्यसैले मिहिनेत र गायनप्रतिको इमानदारीमा अझ प्रतिबद्ध भएँ ।"
यसकै प्रतिफल हो, निशानको व्यावसायिक गायनको रफ्तार । दंग छन्, कम्तीमा हिजो उनलाई भोट हालेर जिताउने र मन पराउने प्रशंसक निराश हुनुपरेको छैन । हिजो मुन्टो बटार्ने रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालक आज उनको उपस्थितिमा धन्य महसुस गर्छन् ।
पाश्र्व गायनमा निशानलाई चिनाउने गीत हो, छक्का-पञ्जा ३ को 'पछि उमेर ढल्किन्छ...' । उनका सोलो ट्रयाक 'मंसिर महिनामा...' र 'भुन्टी...' ले पनि चर्चा बटुले । भिडियोमा आफैँ मोडलिङ गरेका छन् । एल्बम निकाल्ने तयारीमा छन् । हिजोआज कलाकारको आयको स्रोत भनेकै कन्सर्ट हो । कन्सर्टमा डान्सिङ नम्बरको माग हुन्छ । त्यसैले अधिकांश कन्सर्टलाई लक्षित गरेर गीत गाउँछन् । कतिचाहिँ युट्युबमा भ्युज बटुल्न । निशानको गीत छनोटको आधार के हो त ? भन्छन्, "म पैसा कमाउने मात्र होइन, दर्शक/श्रोताको दिलमा पछिसम्म बसिरहने गीत गाउन चाहन्छु । सुन्यो, सकियो मार्का गीत मेरो रोजाइमा पर्दैनन् ।" गायकको बलबुतामा मात्र गीत राम्रो हुने भ्रममा नरहेको उनी सुनाउँछन् । टिमवर्क उनको पहिलो सर्त रहेछ । पाश्र्व गायनमा उनी सुगम पोखरेल र प्रमोद खरेलका फ्यान हुन् भने कालीप्रसाद बाँस्कोटा र हर्कुलस बस्नेतको कम्पोजिसनमा मोहित हुन्छन् ।
निशानले १५ मुलुकमा प्रत्यक्ष गायन पस्किसके । नेपालकै ४० जिल्ला पुगिसके । रेकर्डिङ र कन्सर्टमा भ्याईनभ्याई छ उनलाई । जति उकालो चढ्दैछन्, खुट्टा तान्नेहरु पनि उत्तिकै बाक्लिँदैछन् । तर हतोत्साही छैनन् । आफ्नो कर्मप्रति विश्वास छ । सफलताले घमन्ड होइन, थप जिम्मेवारीबोध हुन्छ, उनलाई । कुराकानीको बिट यसरी मारे, "कति संघर्ष गरियो, कति गर्न बाँकी छ । हरेक कठिन परिस्थितिको सामना गर्न तयार छु । किनभने संगीतबाहेक अर्को सपना छैन मसँग ।"